Applied Psychology for Business & Marketing (Part 1) • Toe Tet
Applied Psychology for Business & Marketing (Part 1)
Today Promotion = 29,000 Ks
လူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက် စိတ်ပညာကို ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုပါတယ်။ စိတ်ပညာကို ကျွမ်းကျင်ဖို့အကုန်လေ့လာနေစရာမလိုပါဘူး။ အသုံးချ အပိုင်းကို အသားပေးလေ့လာရင် ရပါပြီ။
ဒါကြောင့် ✍️စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဦးဆောင်နေသူများ ✍️လုပ်ငန်းရှင်နှင့် စွန့်ဦးတီထွင်များ ✍️မန်နေဂျာများ ✍️စိတ်ပညာကို အသုံးချလိုသူများအတွက်
1. Physiological state
4. Social Conformity
5. Decoy Effect
6. Psychology of Flow
8. Scarcity Marketing
9. Font Size Matters
11. Habit Loop
13. Law of Association
14. AIDA Method
15. Cause & Effect
16. Body Language
17. Language Pattern
သင်ကြားမည့်ဆရာ Dr. Phyo Paing
Dr. Phyo Paing သည် မန္တလေး ဆေးတက္ကသိုလ်မှ M.B.,B.S ဘွဲ.ရရှိခဲ.ပြီး ABE (UK) မှ Graduate Diploma in Business Management, Diploma in Psychology (UK) နှင့် MBA ဘွဲ့ကို ရရှိထားသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။
Cognitive Behavior Therapist နှင့် Certified Hypnotist တစ်ဦးဖြစ်သည့်အပြင် American Board of NLP မှ အသိအမှတ်ပြု Certified Master NLP Practitioner, Certified Master Timeline therapist နှင်. Certified Master NLP Coach ဖြစ်ပါသည်။
အသုံးချစိတ်ပညာနှင့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်များကိုအထူးပြုလေ့လာပြီး Educators များ၊ Trainers များနှင့် Coaches များကို သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။ သင်တန်းများတွင် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ဆရာဖြစ် Training of Trainers သင်တန်းများ၊ Coach Certification Program များနှင့် လူငယ်များမှတ်ဉာဏ်ကောင်းအောင် Accelerated Learning Programs များကို ပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။
Dr. Phyo Paing သည် မန္တလေးအခြေစိုက် Y.E.C Education Company ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Certified Guerrilla Marketing Coach (USA) တစ်ဦးဖြစ်သည့်အပြင် Guerrilla Marketing Coach Certification Program ကို ပို့ချပေးနေသည့် Chief Master Trainer တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
အသုံးချစိတ်ပညာနှင်. Marketing ကို လေ.လာခဲ.ပြီး မားကတ်တင်းနှင့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကို သင်ကြားသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးရှိပြီဖြစ်ပြီး UK diploma တက်ရောက်နေသည့် ကျောင်းသားများ၊ working professionals များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို Marketing နှင့် Business Management ဘာသာရပ်များပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။
Marketing, Entrepreneurship နှင့် Supply Chain Management Certificate များကို Massachusetts Institute of Technology, Wharton University of Pennsylvania နှင့် University of Maryland တို့မှရရှိခဲ့ပါသည်။
Business Management နှင်. Marketing ဘာသာရပ်များကို သင်တန်းသားပေါင်း 20,000 ကျော်ကို သင်ကြားပို.ချပေးခဲ.ပြီးဖြစ်ပါသည်။
P.S စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိပါက ၇ ရက်အတွင်း 100% Refund.
Applied Psychology for Business & Marketing ကို Toe Tet Online Learning Center မှာ လေ့လာရတာ အရမ်း အကျိုးရှိပါတယ်။ ဆရာ ဖြိုးပိုင် ရဲ့ သင်ကြားပေးမှုက Apply ပိုင်းကို အဓိက သင်ကြားပေးတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ လက်တွေ့ဘ၀ မှာ ပြန်လည် အသုံးချနိုင်တာကြောင့် အားလုံးအကျိုးရှိမှာမို့ လေ့လာကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
Tha Zin Nwe
Aung Myo Kyaw
I am Very nteresting applied psychology for business and Marketing.very good presentation and sharing skill.
Saung Paing Oo
Today Promotion 29,000 Ks
Applied psychology everyday
6. psychology of flow (67 Secrets)
15. Cause Vs Effect
45 Mins Magic Income Formula
Guerrilla Marketing Plan (GMP)
Essentials of Business Management (EBM)
YEC Online Learning
Copyright © 2016 - 2021 Toe Tet - Online Learning Platform. All Rights reserved.
Developed by DigitalSeed.Agency.
Add Toe Tet to your Homescreen!
Login with email or user name
အကောင့်မရှိသေးပါက Register လုပ်ရန်